Malezia: Niaiky ny Minisitry ny Atitany fa ny vaovao an-tserasera no mahazatra ankehitriny · Global Voices teny Malagasy
Malezia: Niaiky ny Minisitry ny Atitany fa ny vaovao an-tserasera no mahazatra ankehitriny
Voadika ny 11 Febroary 2019 3:35 GMT
Nilaza ny Minisitry ny Atitany ao Malezia, Datuk Seri Syed Hamid Albar araka ny tatitra fa tsy “fanampin'ny fampitam-baovao” ny fampahalalam-baovao amin'ny aterineto satria mihamaro ny Maleziana no mahazo vaovao sy fampahalalam-baovao avy amin'izany .
Nolazainy izany taorian'ny lahateny fampidirana nandritra ny Fihaonambe Akademika momba ny Politikan'ny Fampitam-baovao tao Malezia, izay nokarakarain'ny Ivontoerana Aziatika ho an'ny Fampandrosoana ny Serasera (Aidcom) tany Kuala Lumpur.
Nanamarika ihany koa izy fa nihen-danja ny famakiana gazety raha oharina amin'ireo loharanom-baovao hafa. Araka izany, araka ny voalazan'i Syed Hamid dia niezaka naka tahaka ny fampahalalam-baovao an-tserasera ny gazety mahazatra tamin'ny alàlan'ny fiezahana hitsikera araka izay azo atao mba ho malaza.
Nitondra adihevitra amin'ny hananganana vaomieran'ny fampitam-baovao i Syed Hamid amin'ny hifehezana araka ny lalàna ny gazety. Mbola tsy nilaza indray anefa izy raha toa ka handrindra ny votoaty an-tserasera ity vaomieran'ny fampitam-baovao ity.
Niatrika fitoriana fanalam-baraka imbetsaka ny iray amin'ireo gazety mahazatra Maleziana, Utusan Malezia amin'ny fiteny Malay, sy ny tatitra marobe nataon'ny polisy sy ny fanakianana avy amin'ny gazety hafa momba ny etika ampiasainy amin'ny fanaovan-gazety, izay mety nahatonga ny antso hisian'ny vaomieran'ny fampitam-baovao.
Mandritra izany fotoana izany, niatrika fitsarana ny taona 2008 ireo bilaogera sy ny mpitantana tranonkalam-baovao na dia teo aza ny fanehoan-kevitr'i Syed Hamid, tamin'ny nahitana bilaogera telo izay voalaza fa mety hiatrika (inoana) ho fiampangana fikomiana ary notanana am-ponja tsy misy fitsarana ilay mpitantana ny tranonkalan'ny Malaysia Today.
Nanohitra ny hevitra hananganana vaomieran'ny fampitam-baovao ireo mpikatroka ary tsy hihetsika raha tsy hofoanana ny lalàna mametra ny famoaham-baovao , indrindra ny lalàna fanontana printy sy ny famoaham-baovao, ny lalànan'ny fikomiana, ny lalànan'ny tsiambaratelo ofisialy ary ny lalàna momba ny fiarovana anatiny.